Hawiyoow Dadkiina maxaa qiima tiray | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Hawiyoow Dadkiina maxaa qiima tiray
Hawiyoow dadkiinna maxaa qiimo tiray mase ogtihiin in geeridiinna lagu wiirsado ama waxaan jirin laga soo qaado inaad adinku masuul katihiin?
Iyadoo shir loo fadhiyo magaalada Dhuusamarreeb 15, July 2020 ayaa lasoo sheegay geerida Rabbi ha u naxariistee Ex RW Xassan Abshir Faarax, Waxaa durbadiiba diyaarad qaatay oo shirkii isaga tegay Siciid Cabdullaahi Deni oo Axmed Madoobe horay usii raacay sidoo kale Ex RW Xassan Kheyre ayaa kaqeyb galay Aaskii Xassan Abshir.
11-ki September 2020 iyadoo sidoo kale shir loo fadhiyo Muqdisho ayaa lasoo sheegay in Kismaayo lagu qarxiyay guddoomiyihii rugta ganacsaiga Jubbaland Rabbi u naxariistee Shaafi Raabbi Kaahin. Waxaa shirkii isaga tegay Axmed Madoobe si uu uga qeyb galo aaska Shaafi Raabbi.
Habeen hore oo kubeegnayd 31-ki jannaayo 2021 Muqdisho waxaa lagu dilay Jenaraal Maxamed Nuur Galaal oo shalay oo ahayd 1 febaraayo Meydkiisa lagu aasay Guriceel oo dhuusamarreeb u jirta 60 km, lkn nasiib darro Madaxweynihii larabay in haddii Jenaraalka lagu aasayo Muqdisho uu diyaarad qaato si aaska uga qeyb galo ayaa isku mashquuliyay soo dhoweynta Farmaajo isagoon kaqeyb gelin aaski.
Ugu dambeyn dad isqiimeeya ayaa bulshadu qiimeysaa ee ogaada inaad adinku iska dhigteen raqiis aan macno lahayn oo cid kasta disho kuna qososho.
Previous articlehadii aad maqlijirtey Dad ayaa la tahriibineyaa tanaa kadaran.
Next articleGRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAMS OF TON DUC THANG UNIVERSITY
Xubnaha midowga musharraxiinta mucaaradka oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa si adag uga hadlay xaaladda cusub ee uu dalku galay, gaar ahaan muddo kordhinta loo...
Israeli air strike flattens Gaza building housing Al-Jazeera, FRANCE 24 with...